Maamulka Gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Kan Jowhar oo la dhameystiray – Radio Muqdisho
Maamulka Gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Kan Jowhar oo la dhameystiray
Wasaaradda arrimaha gudaha iyo Federaalka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dhamaystirtay xubnaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya, mudane Cali Saciid Xalane ayaa wareegtada dhamaystirka maamulka oo ka soo baxday Wasaaradda ka akhriyey kulan lagu soo bandhigay xubnaha loo magacaabay xilalka maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar, kaddib markii ay maanta gaareen magaalo madaxda Gobolka Shabeelaha Dhexe ee Jowhar.
Wareegtada oo soo baxday 22-11-2014-ka ayaa xilal heer gobol ah loogu magacaabay mas’uuliyiinta kala ah:
1- Axmed Meyre Makaraan oo loo magacaabay Guddoomiye ku-xigeenka gobolka ee arrimaha siyaasadda iyo amniga.
2- Cabdullaahi Yuusuf Calaf oo loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka gobolka maamulka iyo maaliyadda.
3- Maxamuud Sugaal Cismaan oo loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo horumarinta.
4- Sheekh Abuukar Xasan Cali oo loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta iyo
5- Yuusuf Nuur Xuseen oo loo magacaabay Xog-hayaha guud ee maamulka gobolka.
Wareegtada ayaa waxaa kaloo lagu magacaabay mas’uuliyiinta maamulka degmada Jowhar, kuwaas oo kala ah:
1- Maxamed Cali Muuddeey oo loo magacaabay guddoomiyaha degmada Jowhar.
2- Xasan Barroow Bocor oo loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka degmada ee arrimaha bulshada iyo
3- Xasan Goomey Calasoow oo loo magacaabay guddoomiye ku-xigenka degmada ee arrimaha maamulka iyo maaliyadda.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Guudlaawe ayaa soo dhaweeyay dhameystirka maamulka Gobolka iyo kan degmada.
Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, ayaa mas’uuliyiinta cusub kula dardaarmay inay ku dadaalaan gudashada waajibaadkooda qaran ee loo igmaday.
Barcelona oo Espanyol Ka Badisay Kulankii Catalan derby “SAWIRRO”